हानिकारक क्याल्सियम कार्वाइड रसायनको प्रयोग गरिएका फलफूल कसरी चिन्ने ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com हानिकारक क्याल्सियम कार्वाइड रसायनको प्रयोग गरिएका फलफूल कसरी चिन्ने ? - खबर प्रवाह
क्याल्सियम कार्वाइड रसायनबाट उत्पन्न हुने एसिटिलिन ग्याँस स्टील धातु वेल्डिङ गर्न प्रयोग गरिन्छ । यो ग्याँसले मानिसमा क्यान्सर उत्पन्न गराउन सक्छ । कतिपय व्यापारीहरुले फलफूललाई छिटो पकाउन क्याल्सियम कार्वाइड रसायनको प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
यदि यो रसायन राखेर पकाइएका फलफूल खानुभयो भने ती फलफूलले स्वास्थ्यलाई असर पुर्‍याउन सक्छ । हुन त फलफूल स्वास्थ्यका लागि लाभदायीक खानेकुरा हो । तर क्याल्सियम कार्वाइड रसायन राखेर पकाइने फलफूलले स्वास्थ्यलाई असर पुर्‍याउँछ ।
विशेषगरी केरा, आँप, मेवा आदिलाई छिटो पकाउन व्यापारीहरुले यो रसायन प्रयोग गर्न सक्छन् । यदि यो रसायन राखेर फलफूल पकाइएको रहेछ भने स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन र तत्कालीन असरहरु देखिन सक्छ ।
क्याल्सियम कार्वाइड रसायन प्रयोग भएको फलको असर यस्तो छ
–मुखमा अल्सर हुन सक्ने,
– आमाशय पोल्ने,
– झाडा पखाला लाग्ने,
– रिङ्गटा लाग्ने,
–मानसिक समस्या हुनक्ने ।
कसरी रहने सचेत ?
–उपभोग भन्दा अगावै फललाई राम्ररी धोइपखाली गर्ने, सकेसम्म बगिरहेको पानीले केही समय सम्म पखाल्ने । यस्तो गर्दा फलफुलमा हुने हानिकारक रसायनहरु भएमा पखालिएर जान्छ ।
–आफ्नो प्राकृतिक समय भन्दा फरक समयमा पाकेका देखिने बजारमा विक्रीका लागि राखिएका फलहरु भरसक उपभोग नगर्ने । समय अगावै बजारमा पाकेका फलफूल आएमा त्यसमा क्याल्सियम कार्वाइडको प्रयोग गरिएको हुनसक्छ । त्यसैले मौसमी फलफूल मात्र खाने ।
–आँप, मेवा जस्ता फलहरु सिधै सिङ्गै खानु हुँदैन । त्यसलाई ताछेर, काटेर टुक्रा पारेर खानु उपयुक्त हुन्छ ।
–बाहिर आकर्षक देखिनेगरी सबैतिर राम्रोसँग पाकेको फलफूलमा क्याल्सियम कार्वाइड राखिएको हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो फलफूल नखाने ।
–फलको बाहिरी भाग बोक्रा तथा भेट्नामा काला दागहरु तथा धब्बाहरु छन् भने त्यसमा क्याल्सियम कार्वाइड प्रयोग गरिएको हुनसक्छ । त्यसैले कालो दाग तथा धब्बा देखिएको फलफूल नखाने ।
– फलको बोक्रा वा भेट्नामा सेतो, खैरो, धुलो देखिएमा यसमा पनि कृतिम रसायन राखेको हुनसक्छ । त्यसैले फलफूल किन्दा यस्तो कुरामा बिचार गर्नुपर्छ ।
–पाकेका फलफूलको प्राकृतिक बास्ना बाहेक अन्य बाहिरी अस्वभाविक गन्ध वा स्वाद आएमा त्यसमा क्याल्सियम कार्वाइड प्रयोग गरिएको हुनसक्छ । त्यस्तो फलफूल पनि खानु हुँदैन ।
पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा सरिता गिरीद्वारा प्रश्नको वर्षा : दिइन् पार्टीलाई नै चुनैती